MLBB Update Notes – 1.2.30
By : Mobile Legends MM
I. Hero အသစ်နှင့် ပြောင်းလဲထားသည့် Hero
[Planes Dominator] – [Zhask] စိန် 599 32000BP ထွက်ရှိပြီး ပထမပတ်အတွင်း 30% လျော့စျေး
Hero ၏ လက္ခဏာ: ပထမဆုံး ပြုလုပ်ဖန်တီးထားသည့် Skill4မျိုးပါသည့် Mage! Zhask ဟာရန်သူများကို အိပ်မက်ဆိုးဖြင့် တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပါသည်။
Skill 1:[Nightmaric Spawn]– သတ်မှတ်ထားသည့် တည်နေရာတွင် အိပ်မက်ဆိုး ၏ ရုပ်ပုံစံ ပေါ်ထွက်လာပြီး ထို အိပ်မက်ဆိုး ရုပ်ပုံသည် ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းမရှိပဲ အနီးနားလာသည့် ရန်သူမှန်သမျှကို အလိုလို တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပါသည်။ Basic Attack ၂ ကြိမ်ပြည့်တိုက် ရန်သူကို သေစေနိုင်အောင် ပစ်ခတ်မှာဖြစ်ပါသည်။ အိပ်မက်ဆိုး ၏ရုပ်ပုံ ပိုင်ဆိုင်သည့် တိုက်ခိုက်ရေး အချက်အလက်များသည့် Skill Level အလိုက် ဖြစ်ပါသည်။
Skill 2:[Nightmaric Intrusion]– ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သည့် လက်နက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာသို့ ပစ်ခတ်ပြီး ထိခိုက်သည့်ရန်သူကို မှော်စွမ်းအားဖြင့် ထိခိုက်စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Skill 3:[Hivemind Duplicates]– ပစ်မှတ် တည်နေရာသို့ အတန်းလိုက် အိပ်မက်ဆိုး ရုပ်ပုံစံများ ပစ်လွှတ်ပြီး အနည်းငယ် ကျော်ခွပြီးသည့်အခါ သူတို့ဟာ မြေကြီးထဲသို့ ကျုံ့ဝင်ပြီး မိုင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ရန်သူနှင့် ထိတွေမှု မဖြစ်ခင် ပေါက်ကွဲပြီး ရန်သူများကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေမှာဖြစ်သည့်အပြင် ရန်သူ့ ရွေ့လျားမှုနှုန်းကို လျော့ကျသွားအောင် ပြုလုပ်စေမှာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သူတို့ဟာ ရန်သူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုမဖြစ်ပါက မြေကြီးထဲ ၀င်သွားပြီး ကျော်သွားသည့် ရန်သူများကို တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပါသည်။
Ultimate:[Dominator’s Descent]– အိပ်မက်ဆိုး၏ ရုပ်ပုံစံ သည် စွမ်းအားများ သိသိသာသာ တိုးလာပြီး သူတို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုနှုန်း၊ ထိချက် နှင့် ကာကွယ်မှုစွမ်းအားများ တိုးလာပါသည်။
Passive:[Eradication]– အိပ်မက်ဆိုး၏ ရုပ်ပုံစံသည့် ကိုယ့်ကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ အတွင်းဘက်သို့ ကျွံ၍ပြိုဆင်းစေပြီး True damage ဖြင့်ထိခိုက်မှုပြုလုပ်စေမှာဖြစ်ပါသည်။ Zhask ၏ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်က: ပပျောက်ရေး။
II. အပတ်စဉ် အခမဲ့ Hero များနှင့် Skin အသစ်များ
1. Server အချိန် 2017/11/10 05:00:00 မှ 2017/11/17 05:01:00 အတွင်း အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော Hero 8 ယောက်မှာ Saber;Karina;Franco;Minotaur;Kagura;Ruby;Estes;Lapu Lapu တို ့ဖြစ်ပြီး Starlight မန်ဘာဝင်များအတွက် အပိုအခမဲ့: Clint;Hayabusa;Sun;Cyclops;Vexana;Irithel တို ့ဖြစ်ပါတယ်။
Server အချိန် 2017/11/17 05:00:00 မှ 2017/11/24 05:01:00 အတွင်း အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော Hero 8 ယောက်မှာ Nana;Franco;Akai;Lolita;Chou;Yi Sun-Shin;Johnson;Vexana တို ့ဖြစ်ပြီး Starlight မန်ဘာဝင်များအတွက် အပိုအခမဲ့: Rafaela;Natalia;Alpha;Estes;Roger;Grock တို ့ဖြစ်ပါတယ်။
2. Skin အသစ်များ:
[Hylos] ၏ Skin – [Shadowbringer] စိန် 599
[Hylos] နှင့် သူ့ရဲ့ skin [Shadowbringer] လက်ဆောင်ထုတ်အနေဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး ပထမပတ်အတွင်း 30% လျော့ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
III. Hero အပြောင်းအလဲ
သူရဲ ့အစွမ်းတိုးမြှင့်ထားသည့် Basic Attack ဟာ တာဝါတွေပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းထားပါသည်။
Planets Attack: ကြယ် ၅ လုံး၏ တိုက်ခိုက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲ ထားပါသည်။
Charge: ပထမအပိုင်း၏ ကြာမြင့်ချိန်ကို4စက္ကန့် မှ5စက္ကန့် သို့ ပြောင်းလဲထားပြီး ဒုတိရ အပိုင်း၏ တိုက်ခိုက်မှုဟာ base + AD*ratio မှ base + ပစ်မှတ်၏ သွေးရာခိုင်နှုန်း ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်။ Cooldown အချိန်ကိုလည်း 8 စက္ကန့် မှ 10 စက္ကန့် သို့ ပြောင်းလဲ ထားပါသည်။
Guardian’s Bulwark: တိုက်ခိုက်ချက်ကို 240+Skill Level*60 မှ 360+Skill Level*40 သို့ ပြောင်းလဲ ထားပါသည်။
Attack Wave: တိုက်ခိုက်ချက်ကို 325+Skill Level*25+Physical အပိုထိချက်*1 မှ 265+Skill Level*35+Physical အပိုထိချက်*0.8 သို့ ပြောင်းလဲ ထားပါသည်။
Cursed Oath: ပြုစားခံရသူဟာ သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာသို ့အလိုလိုရွေ့လျားသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
IV. ကစားကွင်းမှ အသုံးဆောင် ပစ္စည်းများ နှင့် Spell အပြောင်းအလဲများ
ဘေးလမ်းမှ Minion များ၏ တည်နေရာများကို ဘေးလမ်းမှာရှိတဲ့ ခြံုများ နှင့် နီးစပ်အောင် ပြောင်းလဲထားပါသည်။
တပ်သားများမှ ရရှိသည့် EXP ကို 10% လျော့ချလိုက်ပါသည်။
တောကောင်များ (Spinner နှင့် Reaper မှလွဲပြီး)37 magical resistance ထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။
သွေးရရှိနိုင်သည့် တောအောင်များ၏ (ပင့်ကူမှလွဲပြီး) ပြန်လည်ရှင်သန်ချိန်ကို 60 စက္ကန့် မှ 70 စက္ကန့် သို့ပြောင်းလဲထားပါသည်။
စကားကွင်း အသုံးဆောင် ပစ္စည်းများ:
[Pillager Axe] နှင့် [Beast Killer]: Retribution ၏ အဆင့်မြင့်တက်ခြင်း သက်ရောက်မှုကို အသစ်ပြန်လုပ်ထားပါသည်။ အရင်ကလို ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက်မှုကိုခိုးယူခြင်း မဟုတ်တော့ပဲ အမြင့်ဆုံး သွေးရဲ့ 6% ကိုကာကွယ်သည့် ဒိုင်းကို5စက္ကန့် ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
V. ပွဲအသစ်များ နှင့် အင်္ဂါရပ်များ
1. ပွဲ: အကောင်းဆုံး ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်း ပွဲတော်!
ကစားသူများဟာ နေ့စဉ် classic/ranked/brawl mode သို့ဝင်ရောက်ပြီး ပါ၀င်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် FB သူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အရသာရှိတဲ့ စားစရာများ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ဤစားသောက်ဖွယ်ရာများကို သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
အမျိုးအစား ၉ မျိုးရှိတဲ့ စားစာရများကို ပွဲတော်ကျင်းပရန် ရယူပြီး မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့ ရှားပါးသည့် skin များကိုလည်း ကံအပေါ်မူတည်ပြီးရရှိ နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ (ရှိပြီးသား Skin များကိုတော့ Skin fragments အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါသည်။)
Skin ဆုများကတော့ :
[Miya]—[Queen of Banshees]
2.ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်း ပွဲတော်: ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော ကစားသူများအတွက် ပွဲတော်! ကစားသူများဟာ လူမှုကွန်ယက်များတွင် ဖိတ်ခေါ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ကစားသမား အဟောင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးသူတို့နှင့်အတူကစားတာ သို့မဟုတ် ထိုကစားသူ ဟာကစားပြီး အောင်မြင်ပါက သင့်ကို အမှတ်များပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအမှတ်များကို ဆုများအဖြစ် လဲလှယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် ကစားသမားများဟာ သက်မှတ်ချက်များ ကိုက်ညီပါက အထူးပြုလုပ်ထားသည့် ရုပ်ပုံ ဘောင် နှင့် ပြန်လာခြင်း ရ ရက်လက်ဆောင် ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
4. System ဟာ AI ကွန်ပြူတာများနှင့် ကစားရန် Ping မြင့်မှသာ ကစားရန် ကစားသူများကို အကြံပြုတော့မှာဖြစ်ပါသည်။
VI. System အပြောင်းအလဲများ
1 ကစားသူများရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပိုမိုလွယ်ကူအောင် ဖော်ပြနိုင်ရန် အချက်လက်များဖော်ပြသည့် စာမျက်နှာကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်:
a) သင့်ရဲ့ FB အကောင့်နှင့်ချိတ်ထားပါက ထို FB မှပုံအား ပိုမိုမြင်သာအောင် ပုံအကြီးစားဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသည်။ (ကစားသူများသည် version 1.2.30.217 မတိုင်ခင်အသုံးပြုနေသူများ ယခု Feature ရရှိလိုပါက Game တစ်ခုလုံးကို အသစ်ပြန်ဒေါင်းလော့ချရန်လိုအပ်ပါသည်။
b) ကိုယ်ပိုင် လက်မှတ် သင်္ကေတ ရေးသားနိုင်ရန် အသစ်ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
c) သင့် Profile ကို လာကြည့်သူမှန်သမျှဟာ အခုဆိုရင် မကြာခင်လာကြည့်သူများ အဖြစ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ Profile ကို ဘယ်သူငယ်ချင်းတွေလာကြည့်ထားလဲဆိုတာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။
d) Hero ဖွင့်ယူခြင်း၊ Skin ၀ယ်ယူခြင်း၊ emblems အဆင့်မြင့်ခြင်း စသည်တို့ကို သင့်ရဲ profile တွင် ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါသည်။
e) ကစားပွဲတစ်ခုမှာ သင်ဟာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါက သင့်ရဲ မကြာသေးမှီက Hero များစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြနိုင်သည့် Item များကို ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
f) ကစားသူများအတွက် အဆင်ပြေအောင် Customer Support ခလုပ်ကို ပင်မစာမျက်နှာ သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီး ၊ အကောင့် ပြင်ဆင်မှု နှင့် Advanced Server တို့ကို အကောင့် ပြင်ဆင်မှုစာမျက်နှာသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါသည်။
2.ရာသီဦးချိန်မှာ ပထမဆုံး Epic, Legend, Glorious Mythic Rank ရရှိပါက အပို Effect ပုံစံ နှင့် ရိုက်ယူထားသော ပုံများကို ဝေမျှပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
3. အနိုင်ရရှိခြင်း နှင့် ရှံုးနိပ်ခြင်း ဖော်ပြသည့် ပုံစံကို ပြောင်းလဲထားပါသည်။
4. ကစားပွဲရှာရန် အခန်းထဲဝင်နေသည့် သူငယ်ချင်းကို ဖိတ်ခေါ်သည့် အခါ သူဟာအခန်းထဲမှာ ရှိနေပြီဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
5. အစမ်းသုံးကဒ် အချိန်ကုန်သွားပြီး ကစားပွဲတွင်း Hero ရွေးသည့်အခါ ကုန်ဆုံးသွားသည့် စာကြောင်း ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး နှိပ်လိုက်ပါက တိုက်ရိုက် ၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
6. ကစားပွဲရှာဖွေခြင်း ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ထားပါသည်။ လူနည်းသည့် Server များတွင် ပိုမိုထိရောက်သည့် ကစားပွဲရှာဖွေနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါသည်။
VII. မှားယွင်းမှုများကို ပြင်ဆင်ခြင်း
Ping မှားယွင်းစွာ ပြသမှု ပြင်ဆင်ထားခြင်း
Ban ထားသည့် Hero များကို Ban စာရင်းတွင် ဖော်ပြအောင် ပြုပြင်ထားပါသည်။
[Diggie] ဟာ ကြက်ဥပုံစံဖြစ်နေစဉ် ဘုရင်ကို ရန်စအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကို ပြုပြင်လိုက်ပါသည်။
အချိုးအခြေအနေမှာ Moonton Account စာမျက်နှာဟာ အသုံးပြုမရသည့် ပြသနာကို ဖြေရှင်းထားပါသည်။
Moonton Account အကောင့်ပြုလုပ်စဉ် မှားယွင်းသည့် ပြသနာကို ဖြေရှင်းထားပါသည်။
Custom ကစားပွဲဖွင့်ပြီး Setting ဖွင့်ပါက Flash ဖြစ်သည့် ပြသနာကို ပြုပြင်ထားပါသည်။
အချို့အသော အခြေအနေမှာ Setting စာမျက်နှာမှ ပြန်လာသည့်အခါ သူငယ်ချင်းစာရင်း တွင် မှားယွင်းမှုကို ပြုပြင်ထားပါသည်။
ကစားပွဲမှတ်တမ်းကို ကြည့်ရူ့စဉ် ပြန်ပိတ်သည့်အခါ ဂိမ်းကို Crash ဖြစ်သွားစေခြင်းကို ပြုပြင်ထားပါသည်။
Arena Contest ကြည့်ရူ့နေစဉ် အလံမဖော်ပြသည့် ပြသနာကို ဖြေရှင်းထားပါသည်။
Hero ထိပ်တန်းစာရင်းတွင် ကစားသူ၏ အလံနှင့် တူညီမှုမရှိသည့် မှားယွင်းစွာဖော်ပြမှုကို ပြုပြင်ထားပါသည်။
အဆက်သွယ်ပြတ်ပြီး ပြန်ဆက်သွယ်စဉ် တောင်တွင်းပစ္စည်း အဆင့်မြှင့်စဉ် အဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေသည့်ဟု ဖော်ပြခြင်းကို ပြုပြင်ထားပါသည်။
အချို့ Hardware တွေက Highframe Rate Mode ကို အသုံးမပြုနိုင်သည့် ပြသနာကို ပြုပြင်ထားပါသည်။
ကစားပွဲကြည့်ရှု့စဉ် လုပ်ဆောင်နေသည့်စာမျက်နှာမှာ ဘုရင်နှင့် လိပ်အသံ ထွက်ပေါ်မှုကို ပြုပြင်ထားပါသည်။
iPhone6နှင့် 6s တို့မှာ အချို့ Skill အသုံးပြုမရခြင်းကို ပြုပြင်ထားပါသည်။